Isikhokelo kuThengiso lweAkhawunti ekuJoliswe kuyo | Martech Zone
Umboniso wokuba Demandbase Beka ndawonye le infographic, ngokuthelekisa ukuthengisa ngokwesiko kweB2B kuye Intengiso ekujoliswe kuyo kumnandi. Ngelixa ukuthengisa ngaphakathi kungenisa ukufumana abantu abafanelekileyo kwindawo yakho, kusekho iprofayili ekhoyo kumxhasi wakho ofanelekileyo ekufuneka elandelwe. Ukuchonga abantu abafika kwindawo yakho kunye nokufumana qinisekisa (Iimpawu zeshishini) idatha kumzi mveliso wabo, ubudala, ingeniso, inani labasebenzi, njl.njl. inokukunceda ukuba ubeke phambili iinzame zakho eziphumayo.
Uguquko lwedijithali luyitshintshe ngokupheleleyo indlela abathengi beshishini abanxibelelana ngayo nabathengisi, kodwa abathengisi bayaqhubeka nokuthengisa ngendlela efanayo yakudala. Ewe kunjalo, bahlawula ixabiso lokusilela ukwenza izinto ezintsha: ukuchitha amawaka ngamawaka eedola zentengiso ezingeyomfuneko kwiithagethi ezingasokuze ziguquke. Ke yeyiphi enye indlela? Ukuthengiswa kweAkhawunti ekujoliswe kuyo. Yisisombululo sokuphela esikukuvumela ukuba uchonge iiakhawunti zakho ekujolise kuzo kwaye uthengise kuphela ezo akhawunti kuwo onke amabakala kwinqanaba lefaneli. Demandbase
Demandbase kulapho ubukho beDijithali kunye nokuthengisa okusekwe kwiAkhawunti kudibana khona, kuvumela abathengisi be-B2B ukuba bajolise kubaphulaphuli ababaluleke kakhulu kwaye benze amava abo ukuze benze uthethathethwano lusebenze ngakumbi kwaye lilinganiswe ngakumbi.
tags: Ukuthengisa kwe-b2bIshishini kwishishiniibango lesisekoqinisekisaIntengiso ekujoliswe kuyo